ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာမြေပုံ
İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, [ပို ... ]
Balıkesirဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုဇုန်သည် Common Mind အစည်းအဝေးများ၏ 21 မှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကို Turkishtime နှင့် Halkbank တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ŞerefOğuzကသုံးသပ်ခဲ့သည်။ 1977 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး BALOSB သည် 110 စက်ရုံ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ဒေသတွင်းဘဝမှ Project မှသုံးစွဲအတွက်စီးပွားဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အများအတွက်ဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်း Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဖွင့်လှစ်နှင့်အတူတူရကီ။ Serhat Kars မြို့ရှိရာဒေသအပေါ်တူရကီရဲ့နဲ့အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာကိုတည်ဆောက် [ပို ... ]
ဒေသတွင်းနှင့်ဗန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများစီမံကိန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများစေမည်ဖြစ်သောဗန်, တိုင်းပြည်၏အရေးအပါဆုံးမြို့တ, နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတည်နေရာလူးခဲ့သည်လက်နက်။ ဗန်နှစ်ဦးစလုံး၏အနေအထားကိုအားကောင်းစေ [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan: 'ကျနော်တို့ကို Global Scale ကိုအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတွေဟာ' '
ဥရောပမှာတော့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan "ကျွန်တော်တို့အခုသင်္ဘောန်ဆောင်မှုအတွက်ပထမဦးဆုံးအဆင့်။ ဤအခြေအနေသည်ချော့မော့, ဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြုသမျှကိုသဘာဝ၏ရလဒ်အဖြစ်ယနေ့ကမ္ဘာနှင့်ယှဉ်ပြိုင် [ပို ... ]
စိတ် Denizli စက်မှုဇုံပူးတွဲအစည်းအဝေးတွင် Done
Denizli Organized Industrial Zone တွင်ကျင်းပခဲ့သည့်“ Common Mind Meeting Turkish” ကိုတူရကီအချိန်နှင့် Halkbank တို့ကဖွဲ့စည်းထားသည့်စက်မှုဇုန်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Denizli OIZ ၏အလားအလာများ၊ ပြproblemsနာများနှင့်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Denizli OIZ ပူးတွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး၊ [ပို ... ]
CHP’li Polat’ın Kemalpaşa’da kurulacak Türkiye’nin ilk Lojistik Köyü için alınan acil kamulaştırma kararıyla ilgili soru önergesine Ulaştırma M. Cahit Turhan’dan yanıt geldi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP YDK Üyesi ve [ပို ... ]
လွန် Turkoglu Kahramanmaras ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစစ်ဆင်ရေး
Kahramanmaraşနှင့်ဒေသတွင်းသို့တင်ပို့မှုအတွက်အရေးကြီးသောထပ်ဆင့်တန်ဖိုးများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အရေးကြီးသောTürkoğluထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနသည်စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ Kahramanmaraşကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (KMTSO) ၏ ဦး စားပေးကဏ္priorityများ [ပို ... ]